I-Biography yeShirley Temple: I-Star Star Movie Star
I-TV kunye neFilimu Iiklasi
Biography yeShirley Temple
Inkwenkwezi ye-Movie ye-Child kunye ne-Diplomate yabadala
I-Shirley Temple Black (ngo-Apreli 3, 1928-ngoFebruwari 10, 2014) yayiyiyona nkwenkwezi ye-movie ebomvu kunabo bonke ixesha. Wahokela uluhlu lweenkwenkwezi zebhokisi eziphezulu kwiimfuno ezine ezilandelelanayo kuma-1930. Emva kokuthatha umhlala-phantsi kwiifilimu eneminyaka engama-22 ubudala, waqalisa umsebenzi wokudibanisa, owaquka ukuqeshwa njengombonisi wase-United States eGhana naseCzechoslovakia.
Iminyaka yokuzalwa nokudala
UShirley Temple wazalelwa kwintsapho ethobekileyo.
Uyise wakhe wasebenza ebhankini, kwaye unina wayengumzi. Nangona kunjalo, unina weThempeli wakhuthaza ukuphuculwa kwengoma yakhe, ukudansa kunye nokwenza iitalente eziselula kakhulu. NgoSeptemba 1931, wabhalisa uShirley Temple, oneminyaka emithathu ubudala, eklasini eMglin's School School eLos Angeles, eCalifornia.
Imifanekiso Yemfundo 'uCharles Lamont wathola iThempile kwisikolo sokudanisa. Wamtyikitya kwisivumelwano kwaye wabonisa intombazana encinci kwiingqungquthela ezimbini zeefilimu ezifutshane "Baby Burlesks" kunye ne "Frolics of Youth". Emva kweeMifanekiso zeMfundo zagqitywa ngo-1933, uyise kaThirley Temple wathengisa isivumelwano sakhe nge-$ 25.00 nje.
Inkwenkwezi Yomdlalo Wezingane
Umbhali weengoma uJay Gorney, umbhali-mbhali we- Great Depress- anthem "Umzalwana, Unako Ukuzikhusela I-Dime," waphawula uShirley Temple emva kokubona enye yeefilimu zakhe ezimfutshane. Ulungiselele ukuhlolwa kwesikrini kunye neFox Films, kwaye wabonakala kwifilimu ye-1934 "Yima ne-Cheer." Ingoma yakhe, "Bantwana Bakhothamele," babambe umboniso.
Impumelelo engaphezulu ilandelwe nendima yesikhombi kwi "Little Marker Marker" kunye nefilimu yobude obubizwa ngokuthi "Bantwana Thatha Ingxolo."
I-Shirley Temple "Emehlo Ekhanyayo" ekhishwe ngoDisemba 1934 yamenza inkwenkwezi yehlabathi. Kwakuquka ingoma yakhe yesayina "KwiLollipop Enhle Yomkhumbi." Iibhaso ze-Academy zanikela iTempile ekhethekileyo yoLutsha lwe-Oscar ngoFebruwari 1935.
Xa iifayile zeFox zidibene kunye ne-Twentyth Century Pictures ngowe-1935 ukuze zenze i-20 Cent Century Fox, iqela labalobi abalishumi elinesithoba baqeshwe ukuphuhlisa amabali kunye nemifanekiso yesikrini kwiifilimu ze-Shirley Temple.
Umtya weempumelelo zebhokisi ezibandakanya i-"Curly Top," "I-Dimples," kunye ne "Captain Januwari" ilandelwe kwiminyaka ye-1930. Ngasekupheleni kwe-1935, inkwenkwezi eneminyaka eyisixhenxe ineminyaka eyi-2 500 ngeveki. Ngomnyaka we-1937, i-20 Cent Century Fox yaqesha umqondisi oyingqungquthela uJohn Ford ukuba abonise ifilimu "Wee Willie Winkie." Ngokusekelwe kwimbali yaseRudyard Kipling, yayiyimpumelelo ebalulekileyo kunye nezoshishino.
U-1938 utshintsho lwe "Rebecca waseFranbrobrook Farm" lwaqhubeka nokuphumelela kweShirley Temple. I-20 ye-Century Fox yachitha ngaphezu kwe-1 million yezigidi kwimveliso ye-1939 "Intombi encinane." Abagxeki bavakalisa ukuba "ngu-corny" kunye "ne-homan ecocekileyo," kodwa kwakungekho enye impumelelo yeofisi yebhokisi. I-MGM yenza isibonelelo esikhulu kwi-20 ye-Century Fox yokuqesha iTempile ukuze idlale uDorothy kwifilimu ye-1939 ethi "uMncedisi we-Oz," kodwa i-studio ye-20 ye-Century Fox intloko yaseDarryl F. Zanuck yabaguqula. Endaweni yoko, iMGM isetyenzisile i-movie ukunyusa umdlali we-actress uJudy Garland .
Ngowe-1940, eneminyaka eyi-12 ubudala, uShirley Temple wafumana i-movie yakhe yokuqala yangempela xa "i-Blue Bird", ukuzama ukuphendula impumelelo yeMGM ngokuthi "uMncedisi we-Oz" kunye ne "Abaselula" abazange bajabulele abaphulaphuli.
Inkontileka yethempeli kunye ne-20 Century Fox iphelile, kwaye abazali bakhe bamthuma kwi-Westlake School for Girls, isikolo esizimeleyo esiseLos Angeles, eCalifornia.
I-MGM isayine i-Shirley Temple ukuba ibuyele ekuqaleni kwee-1940. Izicwangciso zenziwe ukuba zijoyine uJudy Garland noMickey Rooney kwiicandelo zabo ze-Andy Hardy. Emva kokuba ezo zicwangciso zawa, i-studio yagqiba ukuba ibe neenkwenkwezi ze-trio kwi "Babes kwi-Broadway," kodwa zathatha uShirley Temple kwiprojekthi ngenxa yokwesaba uGarland noRooney babeya kumisa. Ifilimu yakhe kuphela ye-MGM, ngo-1941 "uKathleen," yahlaselwa ngabagxeki.
Kamva kwiminyaka elishumi, iTempile yabonakalisa ukukhula njengomdlali we-actress ebonakalayo kwimpumelelo ye-1944 "Ukususela Ekuhambeni Kwakho" kunye no-1947 umculi "UCachelor noBobby-Soxer" kunye noCary Grant kunye noMyrna Loy. Nangona kunjalo, wayengeke akwazi ukuthwala ifilimu eyedwa njengenkwenkwezi ye-marquee.
Ngowe-1950, emva kokuguqulwa ekubeni yinxalenye ehamba phambili ye "Peter Pan" kwi-Broadway, uShirley Temple wamemezela ukuhlala kwakhe kumabhayisikobho eneminyaka eyi-22.
I-Shirley Temple yaqalisa ukubuyela emva kwee-1950 xa yayingenisa kwaye ilandise i-anthology yechungechunge lwe-TV "I-Story of Shirley Temple." Kwakubonisa ukulungelelaniswa kwengqondo. Ixesha lesibini labizwa ngokuba yi "Show Shirley Temple Show". Nangona kunjalo, i-NBC ikhansele umboniso ngo-1961 ngokulinganisa okuphantsi.
Ithempeli lenze iindwendwe zibonakala kwi "Show Red Skelton Show," "Hlalani kunye noMitch," nabanye. Ngowe-1965, wayeqeshwe ukuba adlale indima ekhokelayo kwi-sitcom ebizwa ngokuthi "Yiya Ekulweni neHolo leSixeko," kodwa ayizange iphile ngaphaya komqhubi.
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1960, uShirley Temple wabandakanyeka kwiipolitiki zasePublic Republic Party. Wayelahlekelwa umkhosi wokutyunjwa kwesihlalo kwiNdlu yabameli be-US, kodwa uMongameli uRichard Nixon wammisela njengomthunywa waseMelika kwiZizwe eziManyeneyo ngo-1969. Wayekhonza njenge-ambassador yase-Ghana phantsi koMongameli uGerald Ford waza wambiza intloko yomgaqo we-United States ngoJulayi 1976.
Ngaphantsi koMongameli uGeorge HW Bush , uShirley Temple wakhonza njengengummeli eCzechoslovakia kwaye anikezwa ngetyala lokuncedisa inkxaso ye- Velvet Revolution eyaphumelela ekulawuleni i-Communist ezweni. Ngokukhawuleza wamisa ubudlelwane obumbano kunye noMongameli okhethiweyo uVlav Havel waza wahamba naye ekutyelelweni kwakhe kokusemthethweni eWashington, DC
UShirley Temple watshata nomlingisi uJohan Agar ngo-1945 xa wayeneminyaka eyi-17 ubudala, kwaye wayengu-24.
Ngo-1948, babe nentombi, uLinda Susan. Esi sibini sasiqhathaniswa neefilimu ezimbini ndawonye ngaphambi kokuqhawula ngo-1949.
NgoJanuwari 1950, iTempile yadibana no-Charles Black owayengumphathi wezobuchwephesha. Batshata ngoDisemba. UShirley Temple wazala abantwana ababini emtshatweni wakhe wesibini, uCharles Black, Jr., noLori Black, umculi wengoma. Umtshato wesibini uhlala iminyaka engaphezu kwama-50 de ukufa kukaCharles Black ngo-2005.
Xa wayebethelwa ngumhlaza wesibeleko ngo-1972, uShirley Temple wathetha ngokuvulekileyo ngamava akhe aphethwe ngumzimba. Ukuphawula kwakhe okucacileyo kuye kwachithwa isifo sezinye ixhoba lomhlaza webele.
UShirley Temple wafa ngoFebruwari 2014 kwiminyaka eyi-85 yesifo esingapheliyo sesifo se-pulmonary disease (COPD). Le meko yahlaziywa yinto yokuba wayebhembile ubomi, into eyayizifihla kuluntu, ekuthiwa akafuni ukubeka umzekelo ombi kubalandeli.
I-movie ye-Shirley Temple ye-1930 yayingabizi ukuyenza. Babenemvakalelo kunye nelolodramatic kunye nabambalwa kakhulu abambelele kwiindawo zobugcisa zobugcisa kwimifanekiso ehambayo. Nangona kunjalo, babhenela kakhulu kubaphulaphuli ngexesha loKuPhukisa kweNtlanzi bafuna ukuphuphuma kwimpilo yabo yemihla ngemihla.
Ithempeli lashiya umboniso we-movie xa isibheno sakhe saphelile kwaye sabuya sisuka kwindawo yokukhanya ukuze sikhulise abantwana bakhe. Njengoko beba badala, wabuyela ukukhonza uluntu kwiimbopheleleko zakhe ezininzi. I-Shirley Temple yabonisa ukuba inkwenkwezi zefilimu zezingane zazikhula zibe ngabantu abadala baphumelele kwezinye izinto. Kwakhona wabetha umzila kubasetyhini kwizikhundla eziphezulu.
"Yima uvule!" (1933)
"Amehlo Akhanyayo" (1934)
"I-Curly Top" (1935)
"UCaptain January" (1936)
"Wee Willie Winkie" (1937)
"Intombi encinci" (1939)
"Ukususela Ekuhambeni Kwakho" (1944)
"UCachelor noBobby-Soxer" (1947)
> Umnyama, uShirley Temple. Inkwenkwezi yabantwana: I-Autobiography. Iincwadi zeWarner, ngo-1989.
> Kasson, uJohn F. Intombazana encinci eyayithintela uxinzelelo olukhulu: Shirley Temple kunye nama-1930 eMelika . WW Norton, 2014.
7 Iifrimu ezinkulu ezihamba kunye neClint Eastwood
8 Iifrimo ezinkulu zeRita Hayworth
Iimpumelelo zeRichard Burton
Udliwano-ndlebe ne "Lost in Translation" Star Bill Murray
Biography kaGrata Garbo
I-Best Picture ye-Oscar yama-1960
Imfazwe Yehlabathi II: Ukuthathwa kwe-U-505
Indlela yokwenza iPhepha leKholeji elide
Uthando lweGemini kunye neCapricorn
Amaqela aphezulu ase-Irish Pop
INkosi, Amanga, okanye uLunatic: CS Lewis - Jesus Trilemma
Ukusuka kwiRiphabliki ukuya kwiMbuso: iMfazwe yamaRoma yaseActium
Isikhokelo soFundo lweeNqatha
I-Faux Amis Iqala NgoF
Funda iItalian Posssive Adjectives
Ukuhlolisisa i-Dragonfly 44: i-Galaxy engummangaliso
I-Polynuclear Aromatic Hydrocarbon Definition
UPapa Benedict kunye neCondom
Intshayelelo kwiS Stoichiometry
I-TaylorMade ka-2017 M Yentsapho: I-M1 kunye ne-M2 Abaqhubi, ii-Woods, iiHybrids, nee-Irons